Hain-trano teny Anosibe Andrefana : Olona 4 kilan’ny afo -
AccueilSongandinaHain-trano teny Anosibe Andrefana : Olona 4 kilan’ny afo
Hain-trano teny Anosibe Andrefana : Olona 4 kilan’ny afo
Tsy nisy namantarana azy intsony. Efa nikainkona tanteraka, ary ny taolan’ireo olona may kilan’ny afo no nahafantaran’ny olona teny amin’ny manodidina azy, fa tsy tafavoaka ny trano izy ireo. Io no vokatry ny hain-trano goavana niseho teny Anosibe Andrefana, ny alin’ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Mpianaka sy lehilahy iray voalaza fa dokera no hita faty, namoy ny ainy tamin’io alina io.
Nanao izay ho afany ihany ny mponina teny amin’ny manodidina, nifarimbona namono ny afo sy namoaka ireo mbola tavela tao an-tokantranony mialohan’ ny fahatongavan’ny mpamonjy voina. Niseho ihany ny famoizana aina noho ny fahamaroan’ny trano may, izay voalaza fa miisa efatra ireo namoy ny ainy tamin’izany, ary vehivavy ny roa.
Araka izany, trano manodidina 200 isa avy ao amin’io fokontany io no ravan’ny afo. Tokantranon’olon-tsotra hatrany no fantatra fa niatombohan’ny afo, ka niteraka izao loza mahatsiravina sy fahapotehana goavana izao. Araka ny angom-baovao teny an-toerana dia avy amina tokantrano vita amin’ny hazo iray no niandohan’ny firehetana ka nandoro trano marobe, nahafaty olona. Vokatr’izany, ripaky ny afo avokoa ny trano sy ny toeram-pivarotana maro tao an-tanàna, izay saika trano hazo ny ankamaroany. Raha ny fitantaran’ny nanatri-maso, dia tamina trano fivarotana nandrehitra labozia amin’ny alina no niavin’ny afo, fa tsy fantatra mazava kosa izay nampirehitra azy. “Niezaka nanavotra aina izahay nanoloana ny fihitatry ny afo, navoaka ny ankizy sy ny olon-dehibe, saingy nisy ireto olona tavela tao an-tranony, ka efa kilan’ny afo niaraka tamin’ny entana no hita, araka ny nambaran’ny olona niharam-boina nijery mivantana ny zava-nisy”.
Potika sy lasa lavenona araka izany ihany koa ireo entana rehetra tao amin’ireo trano may ireo. Nanano sarotra ihany ny famehezana ny afo, izay efa antsasakadiny taorian’ny firehetana vao tonga ny sampana mpamonjy voina. Ankoatra ny tsy fisian’ny sampana mpamono afo, isan’ny nampahazo vahana ny famaizana ihany koa ny fahabetsahan’ny trano vita amin’ny hazo teny an-toerana. Ora maromaro mihitsy vao voafehy tanteraka ny afo araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpamonjy voina, izay efa tany amin’ny 4 ora maraina tany ho any. Ankoatra ireo namoy ny ainy, olona telo hafa no fantatra fa naratra nandritry ny fikoropahana tamin’ity loza ity.
Nanao tohivakana ny hain-trano raha ny teny Anosibe no asian-teny. Vao ny faran’ny volana aogositra lasa teo no nisy trano maherin’ny folo ravan’ny afo teny an-toerana. Noho ny tsy fitandremana matetika no nahatonga ny loza raha toa ka avy amin’ny trano hazo hatrany no niatombohan’ny firehetana. Mampametra-panontaniana ny rehetra ny anton’izany, misokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ity trangana hain-trano ity. Misy minia mandoro?